Xaalada Dalka Suudaan Oo Wali Cakiran Iyo Shaqo Joojin Guud Ahaaneed Oo Ka Dhaqan Gashay Gabi Ahaanba Dalka Suudaan
10/06/2019(BNN) Ciidamada Sudan ayaa isticmaalay suntan dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceyriyaan dibadbaxayaal isugu soo baxay bartamaha magaalada Khartuum.
Afar qof ayaa ku dhimatay maalinkii kowaad ee shaqa joojinta, sida ay sheegeen dhakhaatiirta gacan-saarka la leh mucaaradka.
Ururada hogaaminaya dibadbaxyada Sudan ayaa waxay shalay ku baaqeen in shaqa joojin guud si militariga loogu cadaadiyo in ay xukunka ku wareejiyaan rayidka.
Qaar ka mid ah shaqaalaha bangiyada,garoomada iyo waaxda korantada ayaa xabsiga loo taxaabay sida ay sheegeen kooxaha dibadbaxa soo qabanqaabiyay.
Ururka ay ku bahoobeen xirfadlayaasha Sudan ayaa waxay sheegeen in shaqaalaha sidoo kale ay xukuuumadda hanjabaad kala kulmeen si looga cabsi galiyo in shaqa joojinta ka qayb qaataan.
Golaha militariga ee haya talada dalkaasi ayaan wali ka hadlin xaaladihii ugu dambeeyay.
Tan iyo intii ay militariga xukunka la wareegay waxa sii xoogaystay dibadbaxyada iyo isku dhacyada ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaasha.
Ra'isul wasaaraha Itoobiya ayaa isku dayaya in uu u kala dabqaado labada dhinac si xiisadda loo dajiyo.
Golaha militariga Sudan ayaa waxay horey u sheegeen in ay joojiyeen wadahadaladii ay la lahaayeen mucaaradka,waxayna militariga billaabeen in ay xoog uga hortagaan dibadbaxayaasha.
Ururka Midowga Afrika ayaa joojiyay xubinimadii Sudan tan iyo inta xukunka lagu wareejinayo dowlad rayid ah.
Ha'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhankooda ka digay gacanta adag ee ay laamaha ammaanka kula dhaqmayaan dibadbaxayasha